हात्तीपोलो देखाउन आतुर छ सौराहा ! | We Nepali
हात्तीपोलो देखाउन आतुर छ सौराहा !
२०७३ पुष १० गते ९:५४
चितवनको सौराहामा हात्तीपोलो खेलमा सहभागी हुँदै हात्तीहरु । तस्वीर ः नारायण ढुंगाना , रासस
यो वर्ष क्षेत्रीय होटल सङ्घ चिवतन सौराहाले संस्थागत रुपमा खेलाउन लागिएको पोलो दुई समूहमा ३÷३ वटा हात्तीलाई सहभागी गराइँदै छ । खेल १०, १० मिनेटको हुन्छ । यही पुस ११ देखि १५ गतेसम्म चल्ने चितवन हात्ती महोत्सवको थप आकर्षण हात्तीपोलो प्रतियोगिता हुने पक्का छ ।
सुरुसुरु मै यो अभियानमा लागेकामध्ये एक गिरीधारी चौधरी अहिले हात्ती महोत्सवसम्मको आयोजना भएको देख्दा खुसी लागेको बताउँछन् । तर जनावरका अधिकारको वकालत गर्ने कतिपयले हात्तीका गतिविधिलाई जनावरको अधिकारसँग जोडेर खेलकुदमा सहभागी गराउन नहुने बताइआएका छन् । तर क्षेत्रीय होटल सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शंकर सैंजु ढड्डी र साल रुखका भएको छुट्टै प्रकृतिको यहाँको वन भएकाले हात्तीमा चढेर बाघ गैंडा हेर्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था रहेको बताउँछन् । यसैले चितवनमा हात्तीको छुट्टै महत्व देख्ने उनी जनावरको अधिकार संरक्षण गर्दै मानिस र हात्तीबीच सम्बन्ध बढाई पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षणमा हात्तीका गतिविधि समावेश गर्न खोजिएको तर्क अघि सार्छन् ।